မြန်မာပိုစ့်သတင်း: Back Track5Software ဖြင့် Wifi Password Hack နည်း စာအုပ်လေးကို Free Download ဆွဲမယ်
မင်္ဂလာပါ မြန်မာပိုစ့်သတင်း ဘလော့လေးမှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျား…. http://mmpostnews.blogspot.com တွင် အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပါက(ဥပမာ .. သတင်းအမှား တင်မိပါက) ရေးသားသူ မိမိ technologicaluniversitystudent@gmail.com ၏ တာဝန်သာဖြစ်ပါကြောင်း..…
မြန်မာပိုစ့်သတင်း ဘလော့လေးကို 8th NOV,2012 မှာ စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်….။
Win HTUT TIN
Back Track5Software ဖြင့် Wifi Password Hack နည်း စာအုပ်လေးကို Free Download ဆွဲမယ်
အခု ကျွန်တော် တင်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ WIFI HACK နည်း မြန်မာလို စာအုပ်လေးပါ။ ဟိုအရင် ကျွန်တော် စသိတုန်းက ဒေါင်းလုတ် ဆွဲခဲ့ပေမယ့် Free မဟုတ်ခဲ့တော့ အခု Free Download လေးကို ကျွန်တော်ပေးပါမယ်။ တစ်ခါတည်း link ကလေးကို ကလစ်လိုက်တာနဲ့ တစ်ခါတည်း ဒေါင်းလုတ်ဆွဲပြီးသား ဖြစ်သွားမှာပါ။ အဲ့ဒီမှာ တစ်ခါတည်း ရှင်းပြထားပါတယ်။ နည်းနည်းရှုပ်မယ်ထင်ရပေမယ့် သူ့အဆင့်နဲ့ သူ ဖတ်ရင်း လေ့လာရင်းနဲ့ ဆိုရင် အဆင်ပြေသွားမှာပါ။
သူကတော့ Back Track5ဆော့ဝဲလ် နဲ့ ဟက်တဲ့ စာအုပ်လေးပါ။ လိုချင်တာကို ဒေါင်းဖို့တော့ သူ့စာအုပ်ထဲမှာ ပါတဲ့ link ကလေးတွေကို ကူးပြီး သုံးသွားရင် အဆင်ပြေသွားမယ် ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဆော့ဝဲလ်ကို ဒေါင်းနေတုန်း ဖြစ်ပေမယ့် လိုင်းက သိပ်မကောင်းတော့ ကြာကြာစောင့်နိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက် မစမ်းသပ်ရသေးဘူးဆိုတာကိုတော့ ဝန်ခံပါရစေ။
အဲ့ဒီ စာအုပ်လေးကို Download ဆွဲဖို့ အောက်မှာ ပေးထားပါတယ်။
Brack Track5ဆော့ဝဲလ် ကိုတော့ စာအုပ်ထဲမှာ ပြထားတဲ့ နည်းနဲ့ Brack Track5ကို ကလစ်ပြီး စာအုပ်ထဲက အတိုင်း Download သွားဆွဲလိုက်ပါ။
စာအုပ်လင့်တွေက အများကြီးရှိပေမယ့် ကျွန်တော်ရရှိခဲ့တဲ့မူရင်းလင့်ကို ဒီနေရာမှာ ကြည့်ရှု့ နိုင်ပါတယ်.။ တခြား လိုအပ်တဲ့ Software လေးတွေကိုတော့ ကျွန်တော့်မှာ အချိန်သိပ်မရတဲ့အတွက် Download ဆွဲဖို့ Link ကလေးတွေ ထည့်ပေးမထားတဲ့အတွက် စာအုပ်ထဲမှာ ပါတဲ့ Link ကလေးတွေကို ကူးယူပြီး ဒေါင်းစေချင်ပါတယ်။နောင်တချိန် ကျွန်တော် အချိန်ရတဲ့အခါ လိုအပ်တဲ့ Download Link ကလေးတွေကို ပြန်ပြီး ပြည့်စုံအောင် ထပ်ပြီး တင်ပေးပါမယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့ ဆိုဒ်လေးမှာ တင်ပေးလိုက်တာက နည်းပညာ ဖြစ်တာ နဲ့ Free Download ဆွဲဖို့ အခက်အခဲ ဖြစ်နေတဲ့ သူတွေ အတွက် အခက်အခဲ မရှိအောင် တင်ပေးထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားသူ စီးပွားပျက် လောက်အောင် ထိတော့ အသုံးမပြုဖို့ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။ နည်းပညာကို တိုးတက်စေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ အချိန်ကုန်ခံ အိပ်ရေးပျက်ခံပြီး တင်ပေးရတဲ့ စေတနာကို နားလည် ပေးစေချင်ပါတယ်။
Download ရယူရန်Free Download Wi-Fi Hacking Book
Posted by နေမခမင်းသား at 7:42 PM
Waiyan April 10, 2013 at 6:46 AM
airmon-ngပြီးရိုက်တော့ interface တို့အောက်မှာ wlan0 or ath0မကျဘူး ဘာမှလည်းလုပ်ရဘူး ဘာလို့လဲခင်ဗျာ
AMACENTER ကို LIke မယ်
Facebook မှ ၀င်ရန်
မိမိတို့က သတင်းကို ကြည့်ချင်လို့ ပဲ ဖြစ်ဖြစ် နည်းပညာ လေ့လာလို လို့ ပဲ ဖြစ်ဖြစ် မိမိတို့ ရဲ့ အချိန်ကို အကုန်ခံပြီး ဘလော့တွေကို သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့တာဟာ မိုးစက်ကလေးတွေကို စုဆောင်းတာ နဲ့ အတူတူပါပဲ ။ မိမိတို့ ရောက်ရှိတဲ့ ဘလော့တိုင်းဘလော့တိုင်းမှာ မှတ်သားစရာတွေကို မှတ်သားသွားပါ…။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် မိမိတို့ စုဆောင်းထားတဲ့ မိုးစက်ကလေးတွေကို အငွေ့ပျံသွားအောင် လုပ်သွားတာနဲ့ အတူတူပါပဲ…။ သွားရောက်ကြည့်ရှု့ ရုံ နဲ့ တော့ မိုးစက်ကလေးတွေဟာ အငွေ့ပျံလိုက် ထပ်စုလိုက် ဖြစ်နေမှာ ပါ ဒီတော့ သေသေချာချာမှတ်သားသွား တာဟာ မိုးစက်ကလေးတွေကို ထိန်းသိမ်းထားတာနဲ့ အတူတူပါပဲ လို့ စကားလက်ဆောင် ပါးလိုက်ပါရစေ…………….။ …
Mobile ဖုန်းမှ အင်တာနက် ရှယ်ယာပေးခြင်း
Back Track5Software ဖြင့် Wifi Password Hack နည်...
Lock ကျနေသော Facebook အကောင့် ပြန်ယူချင်ရင်